Ny fiverenana tonga lafatra amin'ny tokantrano miendrika bala, faritra tena manokana mba hamoronana trano “mahafinaritra” bebe kokoa! - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Ny fiverenana tonga lafatra amin'ny tokatrano miendrika bala, faritra tsy miankina tena manokana hamoronana trano “mahafinaritra” kokoa!
Ny fiverenana tonga lafatra amin'ny tokatrano miendrika bala, faritra tsy miankina tena manokana hamoronana trano “mahafinaritra” kokoa!
2021 / 06 / 19 FisokajianaInterior design 5916 0
Ny trano dia mahafinaritra kokoa noho ny mivoaka!
Fianakaviana manan-janaka telo avy any amin'ny faritanin'i Taiwan, mpivady iray niverina tany Kaohsiung tanàna nahaterahany niaraka tamin'ny zanany vavy kely mba hanomboka fiainam-baovao. Ny trano vaovaon'izy ireo dia noforonina tamin'ny famolavolana HAO any amin'ny faritanin'i Taiwan, ary ny mpamorona dia naneho ny “toetra manokana an-trano” amin'ny asany. Ny lehilahy dia mpitendry mozika feno toe-java-kanto, tompona marika lamaody ilay vehivavy, ary mpilalao sarimihetsika tanora ilay zanaka vavy. Ireo toetra manokana momba ny demografika manokana dia mahatonga ity trano ity ho feno fahafinaretana mahafinaritra ihany koa.
Ny karazan-trano tany am-boalohany dia gorodona fisaka lehibe miendrika bala, ary tsy misy rindrina fizarazarana hafa ao anatiny afatsy ny tsanganana. Nozarain'ny mpamorona ho roa ny efitrano araka ny fizarazaran'ny besinimaro sy ny tsy miankina.
▲ Mavo ny habaka manokana, volontsôkôlà no habakabaka
Nozarain'ny mpamorona ny faritra ho an'ny daholobe arakaraka ny fangatahan'ny tompony amin'ny faritra tsy miankina sy tsy miankina, ary ny faritra ho an'ny besinimaro dia miorina amin'ny foto-kevitry ny “efitrano fisakaizana”, manome toerana malalaka ho an'ny fifandraisana ara-pientanam-po eo amin'ny mpianakavy. Ny faritra tsy miankina dia ny mamorona ny foto-kevitry ny "studio manokana", manome toerana manokana an'ny mpianakavy hanao ny asany manokana.
Ny habaka ho an'ny daholobe dia misy ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efitrano fisakafoanana ary ny lakozia, ary ny efitrano fandraisam-bahiny dia lasa efitrano fiaraha-mikorana ho an'ny fiainam-pianakaviana, manatrika ny varavarankely, miaraka amin'ny fahitana malalaky ny tanànan'i Kaohsiung. Rehefa ampidinina ny efijery projection dia avadika ho efitrano fanaovana teatra kely izy avy eo.
Ny famolavolana grille eo an-tampon'ny efitrano fitehirizana dia tsy vitan'ny hoe manome toeram-pisefoana hipetrahana, fa mamoaka hazavana toy ny jiron'ny atmosfera ihany koa.
Ny fampifangaroana voajanahary amin'ny hazo sy ny rattan dia lasa feon'ny habakabaka, manome ny fianakaviana fomba fiainana milamina, miasa sy milalao ao an-trano, ny trano dia mety ahazoana aina kokoa noho ny hotely kintana, mahafinaritra kokoa noho ny mivoaka!
Tsy toy ny efitrano fisakafoanana mahazatra, ny lamosin'ireo dia nampiasa lamosina nandrasana tanana natambatra tamin'ny fitoeram-boky sy latabatra fisakafoanana namboarina mba hamoronana faritra fisakafoanana mahazatra. Matetika ny zanaka vavy dia mihira sy mandihy eo amin'ny dabilio, ary ny famolavolana latabatra fisakafoana mihantona sy vatasarihana kely dia azo ampiasaina ho latabatra fiasana vetivety ihany koa.
Indraindray ny lehilahy dia manao fanazaran-tena eo amin'ny turf amin'ny lavarangana.
Ny lakozia dia mamaly ny fahazarana mahandro sakafo an'ny fianakaviana maoderina amin'ny alàlan'ny fikolokoloana toerana fandrahoan-tsakafo malalaka sy malalaka ho an'ny fitaovana kely, ary ny fametrahana ao amin'ny faritra misy afo misokatra tsy dia be mpampiasa.
Ireo taila miendrika efa-joro dia manana endrika vaovao sy Retro, ary ny morony boribory amin'ilay nosy dia mamela onja mikoriana kokoa.
Ny efitrano fidirana dia mampiasa sisin'ny boribory ho an'ny fitaratra feno vatana sy ny fiolahana ny kabinetra, ary ny zoro miolaka manokana dia manasaraka ny faritra vovoka amin'ny nosy afovoany mba hamoronana ny fijery farany ny masoandro mamirapiratra ambonin'ny tany.
Ny varavarana misy lavaka boribory dia miditra amin'ny faritra tsy miankina, izay sady misy studio fialamboly no toeram-pialan-tsasatra ho an'ny rehetra.
▲ Ny efitrano fandraisam-bahiny manokana dia zarain'ny efitrano fandraisam-peo manga maizina.
Tamin'ny fotoana voalohany nahitako ilay sarimihetsika dia nahita ilay sarimihetsika aho.
Ny elanelam-piasana dia alamina mitovy amin'ny lafiny roa amin'ny lalantsara. Ny tena mampiavaka ny efitrano dia ny fananany varavarana misosa fitaratra izay manasaraka azy amin'ny sehatry ny asa fakana sary an'ny vehivavy mpandray vahiny, izay vita amin'ny hazo sy ny ratana. Ny takelaka lehibe misy lavaka sy ny fitaratra feno dia mamela ny tompon-trano hiakanjo tsy misy fetra, ary ny ambainy misy sosona roa sosona mamela ny hazavana ao amin'ny efitrano hiova arak'izay ilaina amin'ny fitifirana.
Etsy ankilany amin'ny lalantsara dia misy ny studio fandraisam-peo an'ny tompona lahy, miaraka amin'ny ribbone, marika fanaka natao ho an'ny mpitendry mozika. Ny fanamarihana dia mamorona atmosfera famoronana mitokana amin'ny misasakalina, ary tsapa ho toy ny mozika mihetsiketsika teraka eto.
Ny zanakavavy dia zaza maniry mafy ny hanao fampisehoana, ka ny mpandrafitra dia nandravaka ny habaka tamin'ny tampon-trano ambony sy ambany ary sehatra kely iray izay mety ho toradroa, miaraka amina sehatra mirakitra hira sy dihy, ary koa fampirantiana boky. fampirantiana fitafiana, miaraka amin'ireo ray aman-dreny lasa mpanatrika mahatoky indrindra, sady manome fahafaham-po ny karazana efitrano nofinofy izay nofinofin-dreniny fony izy mbola kely.
Ny vavahady kely mamakivaky ny tampony ambony dia lakozia manokana ho an'ny ankizy, ahafahan'izy ireo milalao lalao sy milalao amin'ny fahalianan'ny ankizy.
Ny efitrano fatoriana dia misy gorodona fa tsy fandriana, mamafa ny filàna seza farafara am-pandriana sy seza, ary ny fametrahana ondana na karipetra dia faritra miala sasatra.
Previous :: Tsipika plastera, tokony hatao endrika toy izao! Next: Hajaina italiana sy rendrarendra hananganana fiainana romantika | HID Helbena Design